Qalliin-yaqaan Muslim ah oo loo aqoonsaday hal-curiyaha sanadka. | HimiloNetwork
Qalliin-yaqaan Muslim ah oo loo aqoonsaday hal-curiyaha sanadka.
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka September 30, 2017	0 196 Views
Toronto (Himilonetwork) – Qalinyahan Muslim ah oo ku nool Mississauga ayaa ku guuleystay abaal-marinta hal-curiyaha sanadka 2017 – oo ah mid ay bixiso Iskaashatada EPSO laguna aqoonsado howlkarnimada iyo qalliimada daweynta cudurrada aadka ugu daran indhaha.
Dr. Iqbal K. Ahmed waxaa abaal-gudka loogu deeqay maalintii Khamiista. Waxaa loo aqoonsaday mid kamid ah dhaqaatiirta ugu fiican ee ku gaaroobay daweynta iyo qalliimada indhaha guud ahaan dalka Kanada.
Wuxuuna kamid ah dadka ugu firfircoon ee xerada qalliimada indhaha looga danbeeyo sanadihii dhawaa. Si kastaba, sanadkii 2010, Ahmed waxaa laga mid dhigay 40-ka dhaqaatiir ee ka yar da’da 40-jirka oo ugu fiican dalka Kanada.
Hadda wuxuu kaaliye profeesar ka yahay Jaamacadaha Toronto iyo Utah.
Previous: Masha Allah – Nin si cajiib leh ugu muslimay gacanta nacab Islaamka.
Next: Doorka aqoon-yahanka iyo ganacsatada iyo kahor-tagga tahriibka.
Wax kabaro Idaha
Laacib Muslim ah oo kooxdiisa kaga tagaya astaanteeda Macatabka
Hey’adda Bisha Cas ee Turkiga oo Ramadaanka caawinaysa dadka gaaraya 10-milyan.
Faa’iidooyinka laga helo cunista Canbaha
Pope Fransis – “La islama simi karo Islaamka iyo argagaxisada.”